Microsoft yakazivisa kuti Azure Sphere ichasvika muna Kukadzi 2020 | Linux Vakapindwa muropa
Muna Kubvumbi wegore rapfuura, Microsoft yakazivisa chigadzirwa chitsva pasi pezita rekuti Azure Sphere, "package solution" inozoita kuti zvishandiso zveIoT zvinyatso chengeteka nekushandisa nyowani Linux-based operating system. Iye zvino Microsoft yazivisa zuva rekuburitsa.
Microsoft yakatora mukana wekugara kwayo kuIoT Solutions World Congress uye akazivisa hurongwa hwe microcontroller kuvhura Azure Sphere (MCU), pamwe chete gumi nerimwe nyowani indasitiri inoshandisa makesi kune yako Azure IoT Central chikuva. Ivo vakanyanya kunangana nekutengesa, hutano, masangano ehurumende kana chikamu chemagetsi. Sekureva kwekambani, mhinduro ichave ichiwanikwa pamwe neyakafambidzana gore rekuchengetedza sevhisi kubva munaFebruary 2020.
Pamwe vamwe venyu vanozviziva Microsoft yakaburitsa yekutanga Azure Sphere chip (MediaTek MT3620) pa Gumiguru gore rapfuura. Inodaidzwa Pluto, iyo system inoratidzira yakasarudzika Linux kernel uye yakachengeteka midziyo yekushandisa.
Neiyi yakachengeteka boot system, vashandisi veSphere vane yakawedzera firmware uye dziviriro yehurdware
Neiyi Microsoft inopindura mubvunzo wakakosha neAzure Sphere: munzvimbo yakabatana yedhizaini, ungachengetedza sei chengetedzo? Mota, midziyo yemagetsi, makiyi, matoyi, zvigadzirwa zvemagetsi zvevatengi, mwenje uye zvimwe zvinofambiswa nema microcontroller (MCUs) uye ese ari kuwedzera kubatana.
Pluto inopa Azure Sphere yakachengeteka kutaurirana chinongedzo kune gore chikuva backend. Pamusoro pezvo, vashandisi vanogona kutora mukana weWi-Fi Hardware manejimendi kuchengetedza maIOT application.
Azure Sphere mhinduro kuti inosanganisira zvitatu. Imwe ndeye iyo MediaTek MT3620 chip, iyo inofanirwa kutogamuchirwa nevakawanda nevatengi veMicrosoft
Chikamu chechipiri ndeche gore rebasa rakagadzirirwa kuchengetedza zvishandiso zveAzure Sphere kuburikidza nesitifiketi-yakavakirwa chokwadi uye nekutarisa iyo tyisidziro uye nekuramba uchivandudza chengetedzo nesoftware kugadzirisa.
Chikamu chechitatu ndecheAzure Sphere OS, sisitimu nyowani yekushandisa inoenderana netsika yeLinux kernel yekupa maIoT zvishandiso kusvika kune akawanda matete ekuchengetedza uye yakachengeteka software nharaunda.
Vatatu vanogadzira machipisi vatove kushanda pamwe neMicrosfmumwe wavo, MediaTek uyo akapasa bvunzo neMT3620 yake, nepo maDutch NXP yanga ichishanda neMicrosoft kubva munaChikumi kuvandudza kugona nemasimba ayo i.MX 8 processor.
"Kubatana kweNXP neMicrosoft iri rimwe danho mukuzvipira kwedu kuenderera mberi nekupa mhinduro dzakakwana kune vatengi vedu," akadaro Joe Yu, mutevedzeri wemutungamiri weLow Power Application Processor Product Line kuNXP. "Neiyi Azure Sphere Certified application processor, vatengi vanogona kugadzira anotevera-chizvarwa zvigadzirwa zvine simba kushanda uye zvakawandisa kugona kweiyo i.MX 8 dzakateedzana uye kunakirwa nerunyararo rwepfungwa rwekuziva zvigadzirwa zvavo zvinodzivirirwa mumunda nechengetedzo yeAzure Sphere sevhisi «.
Pakupedzisira, Qualcomm Inofanira kukurumidza kupa chip yekutanga yeAzure Sphere, iyo tekinoroji imwecheteyo inofanira kunge ichimhanya pane inonzi neMicrosoft "Guardian Modules," iyo inopa kupa kwakabatana kwakachengeteka kumidziyo iripo yemabhizimusi.
kunze kwaizvozvo vatengi vatatu vakazvizivisawoPakati pe "mazana evatengi" ayo Microsoft inozivisa marongero ekushandisa Azure Sphere.
Yokutanga yavo ndiyo yepasi rose kofi cheni "Starbucks", iyo inoshandisa mhinduro yeAzure Sphere yekubatanidza michina yayo yezvitoro neGuardian modules.
Chechipiri ndechekuti Gojo Maindasitiri, musiki wePurell hydroalcoholic lotions yekuisa ruoko utachiona. Iyo kambani iri kuvandudza yavo lotion vanopa munzvimbo dzekuchengetedza hutano neAzure Sphere.
Pakupedzisira, Leoni mugadziri wechiGerman tambo uyo anoshandira maindasitiri akasarudzika akasiyana uye anoda kupa huchenjeri kumatambo ake achiachengetedza.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ruzivo rweiyi noti, unogona kutarisa iro rekutanga bhuku Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft yakazivisa kuti Azure Sphere ichasvika muna Kukadzi 2020
WSL2 yatove neMemory Reclaim